Hodges Hawk Mascot »အမည် Hodges တက္ကသိုလ်အမည်
The Hodges Hawk Mascot အမည်ပါ
ငါတို့ရဲ့ mascot အဖြစ် Hodges Hawk ရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟော့ကင်းနာမည်တစ်ခုလိုအပ်တယ်.
ဤပြိုင်ပွဲသည် Hodges တက္ကသိုလ်မှဒေါက်တာများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားများ၊ ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်ရပ်ရွာလူထုအားလုံးအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏စာရင်းကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ Marketing@hodges.edu။ သင့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအမည်, အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် Hawk ရဟတ်ယာဉ်များအတွက်အမည်တစ်ခုထည့်သွင်းပါ။
၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်အနိုင်ရရန် ၀ ယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါ။ ဝယ်ယူမှုတစ်ခုသည်အနိုင်ရသည့်အခွင့်အလမ်းကိုမတိုးစေပါ။
အရည်အချင်းပြည့်မီဖြေ - ဒီပြိုင်ပွဲကို Hodges တက္ကသိုလ်ဌာန၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းသားဟောင်းများသာတက်ရောက်နိုင်သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတရား ၀ င်နေထိုင်သူများသာဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး၊ အဆိုပါပြိုင်ပွဲအားလုံးသက်ဆိုင်သောဖက်ဒရယ်, ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တားမြစ်ထားသောနေရာတွင်ပျက်ပြယ်။
စည်းမျဉ်းများသဘောတူညီချက်။ ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင် (“ သင်”) သည်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားခြွင်းချက်မရှိအပြည့်အ ၀ လိုက်နာရန်သဘောတူပြီးသင်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုလိုအပ်ချက်များကိုသင်ဖြည့်ဆည်းကြောင်းသင်ကိုယ်စားပြုပြီးအာမခံပါသည်။ ထို့အပြင်၊ သင်ကဤပြိုင်ပွဲ၏ပါဝင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော Hodges တက္ကသိုလ်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအပြီးသတ်အဖြစ်လက်ခံရန်သဘောတူသည်။
ပြိုင်ပွဲကာလ။ ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့၊ မနက် ၇း၀၀ နာရီမှစတင်သည်။ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်ည ၁၁း၅၉ တွင်စတင်မည်။ entries အားလုံးကိုစက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၂၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ၁၁း၅၉ တွင် EST သို့အီးမေးလ်ဖြင့်လက်ခံရရှိရမည်။ Marketing@hodges.edu.
ဘယ်လိုရိုက်ထည့်ပါမှဖြေဆုတစ်ခုရရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အတွက် ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုသည်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းလိုအပ်သည်။ မပြည့်စုံသောသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်သတ်မှတ်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသော Entries များသည် Hodges တက္ကသိုလ်၏တစ် ဦး တည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီနိုင်သည်။ သင်တစ်ကြိမ်သာ ဝင်၍ သင် Hodges University Hawk ရှိသင့်သည်ဟုထင်သည့်နာမည်ကိုပေးမည်။ စည်းမျဉ်းများကိုကျော်လွှားရန်အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ အထောက်အထားများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများစွာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်ညွှန်ပြသည်ထက်ပိုများပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်လိမ်လည်လှည့်စားသောနည်းစနစ်များကိုအသုံးပြုပါကသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများကိုကျော်လွှားရန်အခြားနည်းဖြင့်ကြိုးစားပါကသင်၏တင်သွင်းမှုကို Hodges တက္ကသိုလ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ဆုဖြေပြိုင်ပွဲရဲ့အနိုင်ရရှိသူဟာ Hodges Hawk plush ကစားစရာတစ်လုံးရလိမ့်မယ်။ လျှောက်ထားသူများစွာသည်တူညီသောအနိုင်ရအမည်ကိုတင်ပြပါကအောင်မြင်သူတစ် ဦး ကိုကျပန်းရွေးချယ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါဆုလွှဲပြောင်းမရသောဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာအခွန်များကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲအပါအဝင်မည်သည့်ဆုနှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်ကျစရိတ်မဆို Winner ၏တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ ဆုကိုအခြားသူများအားအစားထိုးခြင်းသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းခြင်း / လွှဲအပ်ခြင်းသို့မဟုတ် Winner မှငွေနှင့်ညီမျှသောတောင်းဆိုမှုကိုမပြုလုပ်ပါ။ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအားလက်ခံခြင်းသည် Hodges တက္ကသိုလ်မှဥပဒေအရတားမြစ်ထားခြင်းမရှိပါကကြော်ငြာနှင့်ကုန်သွယ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်အတွက် Winner ၏အမည်၊ တူညီမှုနှင့် ၀ င်ခွင့်ကိုထပ်မံလျော်ကြေးမပေးဘဲအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။ Hodges တက္ကသိုလ်သည်တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကျောင်းသူ / သားများကို Hodges Hawk ကစားသမားတစ် ဦး ထက်ပိုပေးအပ်နိုင်သည်။
Winner ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အသိပေးချက်ဖြေ - အောင်မြင်သူကို Hodges University ရဲ့ Executive Council ကရွေးမယ်။ Winner ကိုရွေးချယ်ပြီးနှစ်ရက်အတွင်း Winner ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ Hodges တက္ကသိုလ်မှ spam များ၊ junk email သို့မဟုတ်အခြားလုံခြုံရေးဆက်တင်များကြောင့်သို့မဟုတ် Winner ၏မမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်သောအလုပ်မလုပ်သောဆက်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်များကြောင့်သတိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ Winner ကို ဆက်သွယ်၍ မရပါကခွင့်ပြုချက်မရဘဲ၊ ဆုချီးမြှင့်သည့်အကြောင်းကြားစာကိုပေးပို့သည့်နေ့ မှစတင်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခုနစ်ရက်အတွင်းဆုကိုတောင်းခံရန်ပျက်ကွက်ပါက (သို့) ဖြည့်စွက်ပြီးပြည့်စုံသောကြေငြာချက်နှင့်အချိန်မီပြန်လည်ပေးပို့ရန်ပျက်ကွက်ပါကဆုကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ရွေးချယ်ထား။ Winner မှရရှိသောဆုသည်ဒီပြိုင်ပွဲတွင်ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ WINNER (ဒီ HODGES UNIVERSITY ရဲ့တစ် ဦး တည်းသောအကန့်အသတ်မဲ့) ဖြင့်ဤတရား ၀ င်စည်းမျဉ်းများကိုမည်သည့်ချိုးဖောက်မှုမဆိုအနိုင်ရသူအားအရည်အချင်းမပြည့်မှီမှုတွင်ပြိုင်ပွဲ၏အနိုင်ရသူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
သင့်အားပေးအပ်ထားသောအခွင့်အရေးများဖြေ။ ။ ဒီပြိုင်ပွဲကို ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ဟာသင့်ရဲ့ ၀ င်ရောက်မှုကိုရေးသားသူရဲ့မူလလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်းကိုယ်စားပြုပြီးအာမခံပါတယ်။ သူဟာတတိယပါတီရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများကိုမချိုးဖောက်ပါဘူး။ သင်၏ဝင်ခွင့်သည်အခြားတစ်ခု၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ပါကသင်သည် Hodges တက္ကသိုလ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အရည်အချင်းမပြည့်မှီပါ။ အကယ်၍ သင်၏ ၀ င်ရောက်မှုအကြောင်းအရာသည်မည်သည့်တတိယပါတီ၏စီးပွားဖြစ် (သို့) အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးကိုမဆိုချိုးဖောက်သည်ဟုဆိုပါကသင်သည်သင်၏တစ် ဦး တည်းသောစရိတ်ဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများကိုခုခံကာကွယ်လိမ့်မည်။ တရားစွဲဆိုမှု၊ တာ ၀ န်ယူမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်များသို့မဟုတ်စရိတ်များမှဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော Hodges တက္ကသိုလ်မှလျော်ကြေးပေးခြင်း၊ ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းပြုရမည်။ မည်သည့်တတိယပါတီ၏အခွင့်အရေးကိုမဆိုချိုးဖောက်သည်ဟုသံသယရှိသည်။
စည်းမျဉ်းများနဲ့အခြေအနေများ- Hodges တက္ကသိုလ်၏ထိန်းချုပ်မှုမှ လွဲ၍ ဗိုင်းရပ်စ်၊ bug၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိသောလူသားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၊ လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ ထိခိုက်မှုများရှိပါက Hodges တက္ကသိုလ်မှပြိုင်ပွဲကိုဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းအပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ တရားမျှတမှု, ဒါမှမဟုတ်ပြိုင်ပွဲများ၏သင့်လျော်သောအပြုအမူ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးတွင် Hodges တက္ကသိုလ်သည် Hodges တက္ကသိုလ်မှလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမတိုင်မှီနှင့် (သို့မဟုတ်) အပြီးတွင်ရရှိသောအရည်အချင်းပြည့်မှီသောစာရင်းများမှအောင်မြင်သူကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၀ င်ရောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (သို့) ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအားဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သောမည်သူကိုမဆိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသော Hodges တက္ကသိုလ်သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Hodges University သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြိုင်ပွဲ၏သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်မှမပါဘဲဆန္ဒမဲများကိုပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းများကခွင့်ပြုထားသည့်ထက်ပိုသောကွန်ပျူတာတစ်လုံးတည်းမှ entries များစွာ။ သို့မဟုတ် bot, macros, scripts သို့မဟုတ်အခြား ၀ င်ရောက်ရန်အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုကိုအသုံးပြုခြင်း။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအားတမင်တကာဖျက်ဆီးခြင်း (သို့) ပြိုင်ပွဲ၏တရားဝင်လည်ပတ်မှုကိုပျက်ပြားစေရန် ၀ င်ရောက်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုသည်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်နိုင်ငံသားဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်ပါက Hodges တက္ကသိုလ်မှဥပဒေအရအပြည့်အဝရရှိနိုင်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုရှာဖွေပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
တာဝန်ဝတ္တရား၏န့်အသတ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်ခံသူများ၊ တာ ၀ န်ထမ်းများ၊ ၀ န်ထမ်းများ၊ အရာရှိများနှင့်ဒါရိုက်တာများကို ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေ၊ ပျက်စီးခြင်းဖြစ်စေဆုံးရှုံးမှု၊ တရားစွဲဆိုမှု (သို့) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများမှ (၁) ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်သူနှင့် (သို့မဟုတ်) သူကိုလက်ခံခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ ဆုသို့မဟုတ်ယင်း၏မဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း; (၂) မည်သည့်ကွန်ပျူတာ၊ ကေဘယ်၊ ကွန်ယက်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲသို့မဟုတ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) အခြားစက်ပစ္စည်းများ၏ချွတ်ယွင်းမှုအပါအဝင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျရှုံးမှုများ၊ (၃) မည်သည့်ထုတ်လွှင့်မှု၊ တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်အင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုလက်လှမ်းမမှီနိုင်ခြင်း၊ ()) ၀ င်ခွင့်လုပ်ငန်းစဉ် (သို့) ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလူသားချင်း ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ (၅) ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တင်သွင်းခြင်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းတွင်အီလက်ထရောနစ်ဖြစ်စေ၊
အငြင်းပွားမှုများဖြေ - ဤပြိုင်ပွဲကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ဥပဒေများနှင့် [သင်၏ပြည်နယ် / ပြည်နယ်] မှအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေပြOC္ဌာန်းသူများ၏ပCONိပက္ခကိုလေးစားခြင်းမရှိပါ ဤပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များအရပါတီများအကြားဖြေရှင်း။ မရနိုင်သောအငြင်းပွားမှုများနှင့်ဤပြိုင်ပွဲနှင့် ဆက်စပ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသောအရေးယူမှုအကြောင်းအရင်းများကိုလူတန်းစားအရေးယူမှုပုံစံမျိုးမလုပ်ပဲတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ဖြေရှင်းရမည်ဟုပါ ၀ င်သူကသဘောတူသည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသောသင့်ပြည်နယ် / ပြည်နယ်ရှိတရားရုံးရှေ့မှောက်တွင်သာလျှင်။ ထို့အပြင်မည်သည့်အခြေအနေမျိုး၌မျှဤအငြင်းပွားမှုတွင်ပါဝင်သူများအားဆုရရှိရန်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၊ အမှုများသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များအတွက်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိသောရှေ့နေခများအပါအ ၀ င်ပါဝင်သူများ၏အမှန်တကယ်ကုန်ကျစရိတ်များအပါအ ၀ င်၊ ဆိုလိုသည်မှာဤပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကုန်ကျစရိတ်များ။ ပါ ၀ င်ဖြေဆိုသူသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားစေရန် (သို့) တိုးမြှင့်ရန်အခွင့်အရေးအားလုံးကိုငြင်းပယ်သည်။
အောင်မြင်သူစာရင်းအောင်မြင်သူ၏အမည်မိတ္တူတစ်ခုသို့မဟုတ်ဤတရားဝင်စည်းကမ်းများမိတ္တူတစ်ခုရရှိရန်သင်၏တောင်းခံစာကိုတံဆိပ်ခတ်။ ကိုယ်တိုင်ကိုင်တွယ်သည့်စာအိတ်နှင့်အတူ Hodges University Marketing Department၊ 4501 Colonial Blvd. , Fort Myers, USA သို့ Fl 33966 သို့ပေးပို့ပါ။ တောင်းဆိုမှုများကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်ထက်နောက်မကျစေရ။
ငှေကွေးထောကျပံ့သူ: ပြိုင်ပွဲ၏ပံ့ပိုးကူညီသူမှာ Hodges University Marketing Department, 2647 Professional Circle, Naples, FL 34119 USA ။